Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment बच्चालाई मोबाइल हेर्नबाट कसरी सीमित गर्ने ? सोचेजति सहज छैन - Pnpkhabar.com
सिकागो, संयुक्तराज्य अमेरिका, ५ मङ्सिर (रासस/एपी) : शनिबारको बिहान । १० वर्षीय हेनरी हेली उठिसकेका छन् । उनी पाइजामामै छन् तर उनको माइक्रोफोन जडित हेडफोनमा नीलो बत्ती बल्न थालिसकेको छ । उनी ठूलो स्क्रीनमा बच्चाहरुको लोकप्रिय अनलाइन खेल “फोर्टनाइट” खेल्न थालिसकेका छन् ।
एलेनले आफ्नो ठूलो छोराले दिनमा कम्तीमा ३० मिनेट पढोस् भन्ने जबर्जस्ती गरिरहे । वाइफाईमा समय तोकिएसँगै एभरेट घर बाहिर निस्कियो र दुई वटा पुस्तक किनेर ल्यायो । आजभोलि दुवै बच्चा केही समय मोबाइलमा हुन्छन्, र त्यसपछि फुटबल खेल्न थाल्छन् । एभरेटले साक्सोफोन पनि बजाउँछ । हेनरीले बिगुल बजाउनुका साथै ड्रम पनि सिक्न थालेका छन् । मार्था इर्भाइन
यी हुन् आँखा फर्फराउनुका शुभ र अशुभ संकेत…
किन उमेर पुगेका युवतीहरु बिबाह गर्न आनाकानी गर्छन ? यस्तो छ कारण
किन हाँसो–ठट्टा गर्ने केटाहरु देखि लट्ठा पर्छन केटिहरु?
किन मनाउनु हुन्न भ्यालेन्टाइन्स डे ? यस्ता छन् ८ कारण